Kuthetha ukuthini ukuphupha iMouse? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuphupha imouse kunokuba neentsingiselo ezininzi ezahlukeneyo, ezinye zimbi kwaye ezinye zilungile, kuxhomekeke kakhulu kwindlela ephathwa ngayo le ntuku yamalanga.
Ngaba uyoyika kwaye uyonyanya ngenxa yabo? Ngaba ucinga ukuba zizilwanyana eziqhelekileyo ezingenakukhusela kwindalo?
Kwelinye icala, ungacinga ukuba esi silwanyana sisibetho kwaye sizisa izifo ezininzi ezingathandekiyo kwaye sigcina kuphela imeko yaso egwenxa.
Kodwa kwelinye icala, unokuqonda olunye uphawu, uludibanise nesilwanyana esinganyangekiyo, esikrelekrele, esinobuqili, njl. Oko kukuthi, intsingiselo iya kutshintsha ngokusekwe kwindlela oziva ngayo ngayo kwaye kwenzeka ntoni ebomini bakho bangoku.
1 Iphupha lempuku
2 Ukuphupha iigundane kwinkcubeko yamaTshayina
3 Ukuphupha iimpuku ezimnyama okanye ezimnyama
4 Iphupha lempuku emhlophe
5 Iphupha leempuku ezininzi
6 Ukuphupha ubulele impuku
7 Ukuphupha ngempuku ebalekayo
8 Ukuphupha imouse ebalekayo
9 Iphupha lempuku efileyo
Ukhe waphupha nje ngempuku? Ke ngoko, into yokuqala ekufuneka ujonge kuyo kukuba wena okanye umntu osondeleyo kuwe uziphethe kakubi kuyo nayiphi na imeko ebomini!
Ukuba kunjalo, nikela ingqalelo kwakhona kwiimvakalelo zakho kwesi silwanyana, kuba ukuba into oyivayo luloyiko kwaye iyonyanyeka, luphawu lokuba umntu okanye umntu osondeleyo angangcatsha okanye angathembeki, ngelixa usondla iimvakalelo ezilungileyo kwisilwanyana bonisa kuphela ukuba unovakalelo kwimiba ethile yobomi obanjiswe kuyo, njengempuku kumzila ojikelezayo.
Indlela ozibona ngayo impuku encinci iphela ichaza zonke izinto, khumbula oku xa ucinga ukuba intsingiselo yephupha lakho ayinangqondo. Qinisekisa ukuba uhoye abantu abakungqongileyo.
Qaphela: Uninzi lufuna intsingiselo yevangeli yokuphupha impuku, ayithethi ngenkolo kodwa malunga nokutolika.
Ukuphupha iigundane kwinkcubeko yamaTshayina
Ukuphupha iimpuku kwinkcubeko yamaTshayina luphawu lokuchuma, umzekelo! Ngenxa yokuba aba bantu banobudlelwane obuhle kwaye babona esi silwanyana njengento ebaluleke kakhulu ekulinganisweni kwendalo.
Ayothusi into yokuba kwi-zodiac yaseTshayina imouse luphawu lokuqala kwaye abantu abazalwe ngeli xesha ngokubanzi baneempawu ezintle njengokuyila kunye nobukrelekrele.
Ke ngoko, into esinokuyibona kwinto esele siyithethile kukuba kwinkcubeko yaseMpuma intsingiselo yayo intle ngakumbi kunakwinkcubeko yethu yaseNtshona.
Ukuphupha iimpuku ezimnyama okanye ezimnyama
Ukuphupha iimpuku ezimnyama okanye ezimnyama kuthetha ukuba ungahamba kwimeko engathandekiyo, ngakumbi nosapho. Ke cinga ukuba nononophelo ngakumbi phakathi kwabantu obathembileyo.
Sukuba neparanoid okanye ukhathazeke ngabo bonke abantu abakungqongileyo, funda ukukhetha indlela yokubandakanya intsingiselo yamaphupha ebomini bakho.
Ngalo lonke ixesha umntu esenza into embi kuthi, kufuneka sifunde kuyo kwaye simsuse loo mntu ebomini bethu ngokususa kancinci kangangoko.
Siyaqonda ukuba iingxaki zosapho zibuhlungu kakhulu kwaye ayinguye wonke umntu onokuthi aziphelise. Nangona kunjalo, kwanele ukuba ungazivezi kakhulu ebantwini abanamandla okukulimaza ngaxa lithile ebomini bakho.
Iphupha lempuku emhlophe
Ukuphupha iimpuku ezimhlophe okanye ezikhanyayo zihlala zibonisa ukuba into entle inokwenzeka ebomini bakho, mhlawumbi ithuba ekudala lilindelwe, nokuba kukwintsimi yobungcali, kwicandelo lobudlelwane, njl.
Kukwabalulekile ukuba uhlale usazi ukuba kwenzeka ntoni ephupheni, ukuba impuku emhlophe iyafa okanye ibaleke, ezinye iintsingiselo kufuneka zongezwe koku kubomi bakho.
Lungiselela ezona zinto zilungileyo, zilungileyo zikulindile kwindlela yakho entsha.
Amaphupha akulula kangako ukutolika, kufuneka sihlale songeza iintsingiselo zezinye izinto ezenzekayo. Lilonke, ukuba imouse emhlophe ihambe kuphela okanye yenza izinto ezingahleliwe, unokuyitolika njengophawu olulungileyo, ngaphandle kwesithunzi sokuthandabuza.
Iphupha leempuku ezininzi
Ukuba ephupheni bekukho iigundane ezininzi okanye indlwane yeempuku, oko kubonisa ukuba umntu usenokuba uyakukhathaza kwaye uchaphazela ingqondo yakho. Zama ukucinga ukuba wenze into engalunganga kwaye ujolise ingqondo yakho kwizinto ezilungileyo kuphela.
Ukuba abantu abakungqongileyo bakutyhefa kwaye bakukhathaze okanye ubenzakalise, ukubuyela umva yeyona ndlela ilungileyo yokuphepha ukonzakala okungaphezulu. Ukushiya abantu obathandayo ecaleni ukuze bangabi yityhefu sisimo sengqondo esomeleleyo kakhulu.
Ukuphupha ubulele impuku
Ukuphupha malunga neempuku okanye ukuba ubulala imouse ikwaliphupha elihle, elibonisa ukuba ezinye iimeko ziphantsi kolawulo kwaye uya kuphumelela nawuphi na umba ovela ebomini bakho.
Nangona kunjalo, gcinani engqondweni ukuba ubukho bemouse buyeyona nto ibalulekileyo, ukuba umgibe wempuku awunanto kungcono ulumke kakhulu! Kuba kunokuthetha ukuphanga okukufutshane.
Abanye abantu bayakholelwa ukuba ngenxa yokuba impuku sisilwanyana esinengqiqo nesiyilayo, iphupha lesi silwanyana linokuzisa nethamsanqa kwimidlalo yamathuba, njengelothari, umdyarho wamahashe, ibhingo, njl.
Nangona kunjalo, ngokwentsingiselo esele sithethe ngayo ngasentla, kungcono ukuba ubeke ukubheja kwakho wedwa, ngaloo ndlela uphephe ukungcatshwa okanye ukuphangwa.
Ukuba uchonga umntu owenza into engalunganga kuwe, yenza konke okusemandleni ukuba ungabikho ebomini bakho, kungenjalo unokuhlaselwa kamva.
Ukuphupha ngempuku ebalekayo
Ukuba uphuphe imouse ebalekayo, oko kuthetha ukuba ufuna ubugorha obuninzi ebomini bakho. Ukungabinamveliso okanye ukonqena kunokukhokelela kwiingxaki ezininzi, ezinjengokusilela kwengeniso.
Qalisa ukuqhuba ngakumbi emva kwento oyifunayo kunye nobomi bakho, ngaphandle koku kuya kuba nzima kakhulu ukufezekisa zonke iinjongo zakho kwaye uzifezekise ebomini bakho kube kanye.
Qhubeka uhamba, ulandela emva kwamaphupha akho, kwaye uhamba neendlela ezivakalayo zilungile kuwe. Musa ukuma ngxi.
Into elungileyo umntu anokuzenzela yona kukubeka ecaleni zonke izinto ezimmilisayo kwenye indawo, aqhubeke nokubaleka efuna ukufikelela ebomini bakhe, oko kubalulekile.
Ukuphupha imouse ebalekayo
Ukuba uphuphe imouse ibaleka, oko kuthetha ukuba khange ube nesibindi sokujongana nemiceli mngeni yakho. Qala ukucinga ngayo kwaye uqonde apho usilele khona, iimpuku zibalekile kuba azinakho ukubambana nezinye izilwanyana, awunakubonwa unje.
Qala ukujongana nezinto ekufuneka ujongane nazo, asinakuhlala siyibaleka imiceli mngeni kunye noxanduva lwethu, ke eyona ndlela yokuyoyisa konke oku kukuchasene noloyiko lwethu nokoyika kwethu.
Qala ukulungisa iimeko ebomini bakho ezikwenza woyike ukubaleka. Njengoko ixesha lihamba, uya kukwazi ukwenza zonke izinto ekufuneka uzenzile.
Sukuvumela iintshaba zakho zikubone njengexhoba, kodwa njengomrhamncwa, kuphela emva koko unokuzilungisa.
Iphupha lempuku efileyo
Kufuneka uqhubeke nokubaleka emva kwento eza kukonwabisa. Ukuba awuzilandeli iinjongo zakho ngenkalipho nangokuzingisa, ngekhe uwafeze onke amaphupha akho ngokufanayo.
Yeka ukushiya yonke into kamva, jonga ukonwaba kwakho kunye noloyiso lwakho njengeyona nto iphambili ekufuneka uyenzile. Yenza nantoni na ukuze uthathe indawo yakho ilanga. Iimpuku zifa kuphela xa zingakwazi ukubaleka iingxaki zazo, zithathe ebomini bakho.
Ukuphuma kwindawo yakho yokuthuthuzela kubalulekile xa kuziwa ekufezekiseni impumelelo entsha. Yenza yonke into ngeyona ndlela ibalaseleyo ukuze ube neziphumo ezintsha.
Amaphupha ahlala eyindlela elungileyo yokufumana iingcebiso kunye noqikelelo ngobomi bakho. Musa ukoyika ukulandela zonke iinjongo zakho njengempuku.
Balekela ukutya kunye nokhuseleko ngalo lonke ixesha, ekugqibeleni kuyakwenza umahluko omkhulu ebomini bakho.
Uyazi, ukubona amaphupha njengophawu olunokukunceda ukutolika kunye nokulindela ezinye iingxaki ebomini bakho. Sukoyika kuba ukuphupha ngempuku kusenokungabi kubi kangako.